Gudoomiyha Degmada Wadajir oo sheegay in ammaanka magaalada uu faraha ka sii baxayo. « AYAAMO TV
Gudoomiyha Degmada Wadajir oo sheegay in ammaanka magaalada uu faraha ka sii baxayo. by Maamule b 1 of 1
388 Views Date March 18th, 2014 time 8:17 am
Guddoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Xasan Caddow (Axmed Daaci) ayaa khudbad dheer oo uu ka jeediyay degmadiisa waxa uu uga hadlay xaaladda magaalada Muqdisho, isagoo sheegay in ammaanka magaalada uu faraha ka sii baxayo.
Waxa uu sheegay Guddoomiye Axmed Daaci in dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku soo jabeen magaalada Muqdisho, kuwaasi oo haatanba ku sugan gudaha magaalada Muqdisho iyagoo ka soo cararay gobolada dalka.
“Waa in si degdeg ah looga hortagaa Al-Shabaabka ku soo jabay Muqdisho” ayuu yiri Axmed Daaci oo sheegay in haddii ayna taasi dhicin ay noqonayaan kuwo mar walba ku eedeysan wax ka qabasho la’aanta dhinaca nabadgelyada.
Dhinaca kale Guddoomiyaha degmada Wadajir ayaa sheegay in waddooyinka soo gala Muqdisho la dhigo ciidamo suga amniga isla markaana la kordhiyo baaritaanada degmooyinka gobolka Banaadir oo uu sheegay in kooxaha nabad-diidka ah ay ku dhuumaaleystaan.
Hadalka Guddoomiye Axmed Daaci ayaa ku soo beegmaya xilli weerarada, dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho, hase yeeshee Dowladda Federaalka ay kordhisay howlgalada lagu baacsanayo xubnaha Al-Shabaab ka tirsan ee iyagu ku sugan bartamaha magaalada Muqdisho.